Location: musha » Kutumira » Airlines » Samoa Airways ikozvino yakavhurwa yemabhuku
Samoa Airways (OL), yendege nyowani yepasi rose yeSamoa, yakaratidza hurongwa hwayo hwekuchamhembe kwechando sezvo iri kugadzirira kuvhura jeti masevhisi musi wa14 Mbudzi kubva panzvimbo yayo paFaleolo International Airport.
Iyo purogiramu ine nhanhatu nendege pakati peApia neAuckland uye 6 masevhisi pakati peApia neSydney pasvondo, uye achashanda kusvika musi wa 2 Kurume (24).
Samoa Airways ichibhururuka kubva kuAuckland kuenda kuApia neMuvhuro, Chipiri, Chitatu, China, Chishanu neMugovera - uye ichibhururuka kubva kuApia kuenda kuAuckland neChipiri, Chitatu, China, Mugovera, Chishanu neSvondo.
Izvi zvinosanganisirawo nzira mbiri dziri pakati peSydney neApia dzinozobhururuka neChina neMugovera.
Kugadzikana, chinova chinhu chakakosha kune iyo ndege uye kupa kwayo, chinhu chakakosha chechirongwa. Vashanyi vanofamba vachipfuura neAuckland kuenda nekubva kune dzimwe nzvimbo dzeNew Zealand vanozove nebhenefiti yekubatana kwezuva rimwechete (kuenda nekubva kuApia), nepo vafambi vanofamba kubva kumativi eAustralia vachipfuura neSydney vanogona kubatana kusvika kuApia musi iwoyo.
Ndege inoziva kukosha kwezvose zviri zviviri New Zealand neAustralia kuSamoa indasitiri yekushanya, uye mhuri yakasimba, nharaunda, tsika nemabhizimusi zvinongedzo izvo Samoa ine nazvo nyika mbiri. Iyo Ndege ine chivimbo chekuti nendege dzayo, idzo kazhinji dzinoshanda masikati, dzinotsigira kusimudzira kuri kuenderera kwenzvimbo dzekuzorora nedzemabhizimusi uye nekupa vatengi mubhodhi sarudzo yemakwikwi.
Ndege dzese dzichashandisirwa pachishandiswa chigaro che170-kirasi 2-kirasi Boeing 737-800 ine zvigaro zvisere muBusiness Class uye 8 zvigaro muEconomy kabhini.
Ndege dzave kuvhurwa kuitira kubhuka uye vafambi vanogona kusarudza kubva pamitengo yakasiyana siyana kubva kuFIAFIA SAVER (kutanga kubhuka) kuenda kuFIAFIA PREMIUM (bhizinesi kirasi).
Qatar Airways inozivisa kutangwa kwendege dzezuva nezuva dzakananga kuCardiff
Marobhoti anopa vanhu simba rekurarama hupenyu hwakazvimirira